Kulesi sifundo, sizobona izinsuku zokufundisa ngesiNgisi. Esihlokweni sethu esibizwa ngokuthi izinsuku zesiNgisi nesiTurkish, kuzoba khona nokuzivocavoca ngezinsuku zesiNgisi nemisho eyisampula ngezinsuku zesiNgisi. Sizofaka futhi isipelingi nokubizwa kwezinsuku ngesiNgisi.
Okuqukethwe esifundweni sethu sezinsuku zesiNgisi kuqukethe izihloko ezilandelayo, njengoba uskrolela phansi ezansi kwekhasi, uzobona izihloko ezilandelayo.
Ukupela nokubiza izinsuku ngesiNgisi
Izinsuku zesiNgisi kanye nokufana kwazo kweTurkey
Imisho eyisampula mayelana nezinsuku ngesiNgisi
Lusuku luni isiNgisi namuhla? Ulwesingaki namhlanje? ungabuzi imibuzo yakho
Ungasho ukuthi yiluphi usuku namuhla ngesiNgisi
Ukuhlolwa okuncane mayelana nezinsuku zesiNgisi
Ukuzivocavoca ngezinsuku zesiNgisi
Ingoma yezinsuku ngesingisi
Manje ake siqale sikunikeze ukubuka okuhle kwezinsuku zesiNgisi.
Amanothi abalulekile ngezinsuku zesiNgisi;
Izinsuku nezinyanga zesiNgisi kufanele ziqale ngohlamvu olukhulu.
Awudingi ukusebenzisa lonke igama lapho ukhuluma ngezinsuku nezinyanga. Ungasebenzisa futhi izifinyezo esikhundleni salokho, ikakhulukazi kwimibhalo emide.
Igama elithi Inyanga, esibhekisela kulo njengosuku esiNgisini, lisetshenziswa njengeNyanga. Igama elithi izinyanga lithatha isijobelelo -s njengezinyanga. What does usuku mean in English Umbuzo nawo uyazibuza. Igama elithi uSuku lichazwa ngokuthi "uSuku", kanti iZinsuku zethiwa -s ngendlela "Izinsuku". Engxenyeni elandelayo, sizobona ukuthi izinsuku zesonto zifakwa kusiphi isigaba esiNgisini.
* Amagama esiNgisi ngobuningi engeza -s, -es njengezijobelelo, kuya ngegama.
Ziyini Izinsuku Zeviki NgesiNgisi?
Kunezinsuku eziyisikhombisa evikini lekhalenda. Yize usuku ngalunye lunokubhalwa kwalo nomsindo, konke kunokuthile okufana ngakho. Iphela ngegama elithi "Usuku", okusho ukuthi uSuku Lonke. Lolu lwazi lungenza umsebenzi wakho ube lula kancane ngenkathi uzama ukubamba ngekhanda amagama ezinsuku.
Ohlwini olungezansi, uzothola isiNgisi sezinsuku, izifinyezo zazo kubakaki kanye nokufana kwabo kweTurkey. Ngemuva kwalokho ungabheka izincazelo ezimfushane zaleli gama ngalinye, imvelaphi yazo nokuthi zisetshenziswe kanjani emshweni. Kunezindlela eziningi ongazisebenzisa ukukhumbula izinsuku.
Enye yalezi indlela yokusebenza ngokubhala igama ngalinye kahlanu. Enye indlela ephumelelayo ukulungiselela amaphepha amancane anesiNgisi ohlangothini olulodwa lwamakhadi kanye neTurkey kolunye futhi asebenze nendlela yokudweba nokufunda ngokungahleliwe. Ngasikhathi sinye, ungabhala amagama esiNgisi kwezinye izingxenye zegumbi lakho bese ulungisa futhi unamathisele amaphepha amancane azoba phambi kwamehlo akho ngaso sonke isikhathi.
UMsombuluko (Mon): UMsombuluko
NgoLwesibili (Lwesibili): NgoLwesibili
NgoLwesithathu (Wed): NgoLwesithathu
NgoLwesine (Thu): ngoLwesine
ULwesihlanu (Fri): ULwesihlanu
NgoMgqibelo (Sat): ngoMgqibelo
NgeSonto (ngeLanga): NgeSonto
UMsombuluko Luphi Usuku?
UMsombuluko usuku lokuqala lwesonto. Ngendlela yangoMsombuluko, incwadi yokuqala ibhalwa ngofeleba. Noma isetshenziswe emshweni, uhlamvu lokuqala luhlale lubhalwe ngofeleba. Isifinyezo saso siboniswa njengoMon. Ungalibiza kanjani igama elithi Umsombuluko Impendulo yombuzo ukuthi ifundwa njenge- "mandey".
Kunemibono eyehlukene ngemvelaphi yosuku ngalunye lwesonto ngesiNgisi. Ikakhulukazi ngoMsombuluko, ngoMgqibelo nangeSonto, amagama abo kucatshangwa ukuthi avela kwizindikimba zasezulwini. UMoon, okucatshangwa ukuthi ususelwa emagameni athi Saturn, Moon neLanga, umsuka wegama elithi Monday.
Izigwebo Eziyisampula NgoMsombuluko - ngoMsombuluko
Kufanele unikeze izabelo zakho ngoMsombuluko.
Uzonikeza umsebenzi wakho wesikole ngoMsombuluko.
Umsebenzi wesikole ufanele ngoMsombuluko ozayo.
Umsebenzi wesikole uzokwethulwa ngoMsombuluko ozayo.
NgoLwesibili Luphi Usuku?
NgoLwesibili usuku lwesibili lwesonto. Incwadi yokuqala ebhalwe ngoLwesibili ibhalwe ngofeleba. Noma isetshenziswe emshweni, uhlamvu lokuqala luhlale lubhalwe ngofeleba. Isifinyezo saso sikhonjiswa njenge-Tue. NgoLwesibili Ungalibiza kanjani igama Impendulo yombuzo ukuyifunda ngokuthi "tyuzdey".
Umsuka wegama elithi uLwesibili kucatshangwa ukuthi uvela kuTyr, uNkulunkulu wasenganekwaneni waseNorse.
NgoLwesibili - Imisho eyisampula ngoLwesibili
Usuku luni namuhla? - Namhlanje nguLwesine.
Usuku luni namuhla? - Namhlanje nguLwesibili.
Izinsuku zamasonto yilezi: UMsombuluko, uLwesibili, uLwesithathu, uLwesine nangoLwesihlanu.
Izinsuku zamasonto: uMsombuluko, uLwesibili, uLwesithathu, uLwesine nangoLwesihlanu.
Umkhandlu Kazwelonke Omkhulu waseTurkey uzohlangana ngoLwesibili.
IGrand National Assembly yaseTurkey izohlangana ngoLwesibili.
NgoLwesithathu Luphi Usuku?
NgoLwesithathu, uLwesithathu wusuku lwesithathu lwesonto. Ngendlela yangoLwesithathu, incwadi yokuqala ibhalwe ngofeleba. Noma isetshenziswe emshweni, uhlamvu lokuqala luhlale lubhalwe ngofeleba. Isifinyezo saso sikhonjiswa njengo-Wed. NgoLwesithathu Ungalibiza kanjani igama Impendulo yombuzo ukuyifunda njenge- "vensdey".
NgoLwesithathu kwaqalwa njengoSuku lukaWöden. UWöden, noma u-Odin, waziwa njengombusi wombuso wonkulunkulu baseNorse. Leli gama elithathwe ezinganekwaneni selishintshile ngokuhamba kwesikhathi laba nguLwesithathu.
NgoLwesithathu - Imisho eyisampula ngoLwesithathu
Azinawo amakilasi ngoLwesithathu ntambama.
Awekho amakilasi ngoLwesithathu ntambama.
Ukuhlolwa kwangoLwesithathu kuzoba nzima.
Kufanele sihambise i-eseyi ngoLwesithathu.
Kufanele sihambise udaba kungakashayi uLwesithathu.
NgoLwesine Luphi Usuku?
NgoLwesine, uLwesine usuku lwesine lweviki. Incwadi yokuqala ngohlobo lwangoLwesine ibhalwe ngofeleba. Noma isetshenziswe emshweni, uhlamvu lokuqala luhlale lubhalwe ngofeleba. Isifinyezo saso sichazwe njengo-Thu. NgoLwesine Ungalibiza kanjani igama Impendulo yombuzo ukuyifunda njenge- "törzdey".
Umsuka wegama ngoLwesine uvela kuThor, unkulunkulu wamandla nokuvikelwa, onendawo ezinganekwaneni zaseNorse. Usuku olwaziwa ngeThor's Day luqale ukuculwa njengoLwesine ngokuhamba kwesikhathi.
NgoLwesine - Imisho eyisampula ngoLwesine
Umama ubesegula kusukela ngoLwesine olwedlule.
Ulwesihlanu Luphi Usuku?
ULwesihlanu usuku lwesihlanu lwesonto. Ngendlela yangoLwesihlanu, incwadi yokuqala ibhalwa ngofeleba. Noma isetshenziswe emshweni, uhlamvu lokuqala luhlale lubhalwe ngofeleba. Isifinyezo saso sikhonjiswa njengo-Fri. Friday Ungalibiza kanjani igama Impendulo yombuzo ukuyifunda njenge- "firaydey".
NgoLwesihlanu kuvela kunkulunkulukazi uFrigg, noma uFreya, owayengunkosikazi ka-Odin ezinganekwaneni zaseNorse. Leli gama, elikhulunywa njengoSuku lukaFreya, seliphenduke uLwesihlanu ngokuhamba kwesikhathi.
ULwesihlanu - Imisho eyisampula ngoLwesihlanu
Ngizobuye ngibonane nodokotela ngoLwesihlanu oluzayo.
Ngizohlangana nodokotela futhi ngoLwesihlanu oluzayo.
Usuku lwami lokuzalwa lungoLwesihlanu kulo nyaka.
Kulo nyaka usuku lwami lokuzalwa lungoLwesihlanu.
NgoMgqibelo Luphi Usuku?
UMgqibelo usuku lwesithupha lwesonto. Kuyimpelasonto. Incwadi yokuqala ebhalwe ngoMgqibelo ibhalwe ngofeleba. Noma isetshenziswe emshweni, uhlamvu lokuqala luhlale lubhalwe ngofeleba. Isifinyezo saso siboniswa njengoThengisa. Saturday Ungalibiza kanjani igama Impendulo yombuzo ukuyifunda ngokuthi "kulayini".
UMgqibelo uthola igama lawo emsukeni wamagama amaplanethi. Kucatshangwa ukuthi kuvela njengoSuku lukaSaturn. Yashintsha ngokuhamba kwesikhathi yaba nguMgqibelo.
Imisho eyisampula ngoMgqibelo - ngoMgqibelo
Kuthiwani ngoMgqibelo olandelayo?
Namuhla kunguMgqibelo kuthi kusasa kube yiSonto.
NgeSonto Luphi Usuku?
ISonto usuku lwesikhombisa, usuku lokugcina lwesonto. Kuyimpelasonto. NgeSonto, incwadi yokuqala ibhalwa ngofeleba. Noma isetshenziswe emshweni, uhlamvu lokuqala luhlale lubhalwe ngofeleba. Isifinyezo saso sishiwo njengeLanga. Sunday Ungalibiza kanjani igama Impendulo yombuzo ukuthi ifundwa njenge- "sandey".
ISonto lithola igama lalo emsukeni wegama elithi ilanga. Usuku lweLanga lisho usuku lweLanga. Ngokuhamba kwesikhathi, kwaba lula futhi kwaba yiSonto.
ISonto - Imisho eyisampula ngeSonto
Sizoya epikinikini ngeSonto elizayo.
Siya epikinikini ngeSonto elizayo.
Sizoshada ngeSonto elizayo.
Izinsuku ZesiNgisi Imibuzo Yokuzijwayeza
1. Uma izolo kunguLwesithathu, luluphi usuku namuhla?
a) NgeSonto b) NgoLwesibili c) ngoMsombuluko d) ngoLwesine
2. Uma izolo bekuyiSonto, kusasa ngaluphi usuku?
a) UMsombuluko b) NgoLwesibili c) NgoLwesine d) ngoMgqibelo
3. Uma namuhla kunguLwesihlanu, bekuyiluphi usuku izolo?
a) NgoLwesine b) NgoLwesithathu c) NgoLwesibili d) ngoMgqibelo
4. Uma kusasa kunguLwesithathu, bekuwusuku luni namuhla?
a) NgeSonto b) NgoLwesine c) ngoMsombuluko d) ngoLwesibili
5.… .. usuku olulandela iSonto futhi luvame ukuqala ukuqala kweviki lomsebenzi.
a) NgoLwesibili b) ngoMgqibelo c) ngoMsombuluko d) ngoMgqibelo
Eminye imibuzo eyisampula:
Luyini usuku lwesithathu lwesonto?
Ziyini izinsuku zempelasonto?
Yiziphi izinsuku zesonto?
UMsombuluko, uLwesibili, uLwesithathu, uLwesine, uLwesihlanu.
UMsombuluko uLwesibili uLwesithathu uLwesine uLwesihlanu.
Yiluphi usuku lokuqala ukuya esikoleni?
Luyini usuku lokuqala lwesikole?
Lusuku luni iholide?
Zingaki izinsuku ezikhona ngonyaka?
Isampula Imisho Yezinsuku NgesiNgisi
Namuhla usuku lokuqala lwesonto: Namuhla usuku lokuqala lwesonto.
UMsombuluko usuku lokuqala lwesonto. : UMsombuluko usuku lokuqala lwesonto.
NgoLwesibili usuku lwesibili lwesonto. : NgoLwesibili usuku lwesibili lwesonto.
Umama uzofika ngolwesihlanu. : Umama uzofika ngoLwesihlanu.
Ngizobuyela esikoleni ngoMsombuluko ozayo ngoba ngisagula: Ngizobuyela esikoleni ngoMsombuluko ozayo ngoba ngisagula.
Ngizothenga isikhwama esisha ngoLwesihlanu: NgoLwesihlanu, ngizothenga isikhwama esisha.
Kunezinsuku eziyisikhombisa ngesonto: Kunezinsuku eziyisikhombisa ngesonto.
Kunamasonto angama-52 ngonyaka: Kunamasonto angama-52 ngonyaka.
ISonto liqanjwe ngelanga: ISonto liqanjwe ngeLanga.
Yiluphi usuku lweviki oluthanda kakhulu? : Yiluphi usuku lwesonto oluthanda kakhulu?
-Abanamathuba okuthi babekhona ngoMsombuluko.
Akunamathuba okuthi babe lapho ngoMsombuluko.
-Ngakho-ke, ngitshele kabanzi ngokwenzekile ebhayisikobho ngoMsombuluko owedlule.
Ngitshele ngokuningiliziwe ukuthi kwenzekeni ebhayisikobho ngoMsombuluko owedlule.
-Ungathanda ukuya kosuku nami ngoMsombuluko?
Ungathanda ukuya kosuku nami ngoMsombuluko?
-Ngabe kukhona iholide olaziyo, eligubhe ngoMsombuluko?
Ngabe kukhona amaholidi / amaholide owagubha ngoMsombuluko?
-Isikole savalwa ngoMsombuluko odlule, ngoba kwakuyiholide.
Isikole savalwa ngoMsombuluko odlule njengoba bekuyiholide / iholide.
Manje njengoba wazi izinsuku zesonto, uzodinga amagama afanelekile ukuze ukwazi ukuwafaka emshweni. Ungazisebenzisa kalula lezi zinkulumo ngokuya ngesakhiwo somusho. Ukwenza imisho ngesiNgisi kulula kakhulu uma wazi amabinzana ayisisekelo. Ukuze ngekhanda la maphethini, futhi, Izindlela zokufunda zesiNgisi Ungayisebenzisa futhi uyiqinise njalo ngokuyisebenzisa empilweni yakho yansuku zonke.
Nawa amanye amagama nezisho ongazisebenzisa nezinsuku zesonto ngesiNgisi;
Namuhla - Namuhla
Kusasa - Kusasa
Izolo - Izolo
Ekuseni - Ekuseni
Ntambama - Ntambama (12: 00-17: 00)
Kusihlwa - Kusihlwa (Phakathi kuka-17: 00 no-21: 00)
Ubusuku - Ubusuku
Ukuphumula - Impelasonto (Ingasetshenziswa esikhundleni sempelasonto.)
Kunezinsuku eziyisikhombisa ngesonto.
Iziphakamiso Zesihloko Ngezinsuku ZesiNgisi
Izingoma nezindaba ezimfishane kungasetshenziswa uma kuchazwa isihloko sezinsuku ngesiNgisi. Lezi zinhlobo zezingoma, ezilungele abafundi bezikole zamabanga aphansi, zihlala unomphela lapho zilalelwa ngokucophelela nangezikhathi ezimbalwa. Izingane ezizama ukuhamba nezingoma zingafunda kalula ngokufundwa nokufana kwezinsuku.
Njengakuyo yonke imikhakha, kubaluleke kakhulu ukuzijwayeza ukufunda isiNgisi. Ngokuzijwayeza izinsuku zesiNgisi izinsuku ezimbalwa, ukuzisebenzisa emishweni, ukulalela izingoma ngezinsuku zesiNgisi, noma ukufunda ezinye izincwadi, uthola ukuzijwayeza okwanele kulokhu. Ikakhulukazi empilweni yakho yansuku zonke, uzobe usiqinise ngokuphelele isihloko sezinsuku zesiNgisi ngokusebenzisa njalo emishweni yakho.
Sample lyrics mayelana nezinsuku zesonto ngesiNgisi:
Ake ungitshele, zithini izinsuku zesonto?
Uthole uMsombuluko wakho, uLwesibili, uLwesithathu, uLwesine, uLwesihlanu, uMgqibelo, iSonto, futhi
Manje, phinda ngemuva kwenkukhu yenkukhu, nakhu siya khona
Umusho osetshenziselwe ukubuza ukuthi yiluphi usuku esiNgisini;
Imininingwane ebalulekile *
Ngihamba njalo ngamaSonto. (Ngihlala ngihambahamba njalo ngeSonto.)
Njengoba kubonakala emshweni, igama iSonto lithathe isijobelelo -s. Izinsuku zihlala zisetshenziswa emishweni ngaphandle kwezijobelelo. Kepha kuphela uma uzosho okuthile okhethekile kwalolo suku, kufanele ulethe ubucwebe. Isibonelo, kulo musho ongenhla, igama iSonto lithatha isijobelelo -s ngoba uhamba ngeSonto kuphela.
Lapho kukhonjiswa izinsuku, izalathandawo eziyishumi noma ezingaphakathi zisetshenziswa ekuqaleni. Futhi kwesinye isikhathi kuyadideka ukuthi isiphi isilandiso okufanele sisetshenziswe lapho kucaciswa izinsuku zesonto. Ukusebenzisa izengezo zesikhathi kungahluka ngokuya ngokuthi ulisebenzisa kanjani usuku lwesonto emshweni nencazelo yomusho. Isilandiso esithi "in" sisetshenziswa lapho kukhulunywa ngomqondo wesonto lilonke, nokuthi "ku" lapho kukhulunywa ngosuku oluthile lweviki.
NgoMsombuluko, ngeSonto, ngoLwesibili.
Zihlukaniswa Kanjani Izinsuku Zeviki?
Izinsuku eziyisikhombisa ngesonto zihlukaniswe izigaba ezimbili. Kunezinsuku ezimbili esiNgisini njengezinsuku zamasonto nezimpelasonto. Ukuze sisho izinsuku zesonto ngesiNgisi "Izinsuku Zamasonto”Kusetshenziswa isichasiso.
Izinsuku zamasonto- Izinsuku zeviki
Impelasonto - Impelasonto
Umama ubhaka isinkwa namakhekhe ngezimpelasonto.
Umama ubhaka isinkwa namakhukhi ngezimpelasonto.
USato wenza umcibisholo ngezimpelasonto.
UMnu. Sato wenza umsebenzi wokucibishela ngezimpelasonto.
Hlobo luni lwezinto ozenzayo ngezimpelasonto?
Isampula lombhalo wesifundo ngezinsuku zesiNgisi
Ukufundiswa kwezinsuku zesiNgisi kungaba isifundo esiyinkimbinkimbi, ikakhulukazi kubafundi besikole samabanga aphansi. Ukuchaza lokhu, ukusebenzisa umbhalo ngephethini ethile ukuhlaziya lo mbhalo ngokuhamba kwesikhathi kuba yindlela yokufunda ehlala njalo. Ngalokhu, uthisha uqale afundele ikilasi umbhalo bese efundisa igama ngalinye embhalweni ngamunye ngamunye.
Kunezinsuku eziyi-7 evikini. Lezi zinsuku yilezi: UMsombuluko, uLwesibili, uLwesithathu, uLwesine, uLwesihlanu, uMgqibelo neSonto. Izinsuku zamasonto: UMsombuluko, uLwesibili, uLwesithathu, uLwesine, uLwesihlanu. Izinsuku zempelasonto: NgoMgqibelo nangeSonto. Kunezinsuku ezingama-365 ngonyaka. Kunezinsuku ezingama-28, 30 noma ezingama-31 ngenyanga.
Ukwazi izinsuku zesonto ngokuningiliziwe kusizuzisa ngezindlela eziningi. Ngokuqinisekile sisebenzisa izinsuku kuzo zonke izindawo zokuphila kwansuku zonke njengekhalenda, ukuqokwa, umhlangano webhizinisi. Kubaluleke kakhulu ukusebenzisa izinsuku emishweni. Esivivinyweni ozosithatha noma kwezinye izimo eziningi, ungahle ubhekane nenkinga yezinsuku. Ngakho-ke Izinsuku zesonto ngesingisi Kufanele ufunde isifundo ngokucophelela.
Njengoba isiNgisi kuwulimi olungafundeki njengoba kubhaliwe, kufanele ulalele nakanjani ukuphinyiselwa kwamagama lapho uqala ukufunda. Kufanele uzame lokhu izikhathi ezimbalwa ngokuliphinda izwi ngokuzwakalayo ngemuva nje kokulalela isichazamazwi. Ukuphinda amagama osanda kuwafunda kuze kuphume imisindo ngokuphelele nangokucacile kuzohlinzeka ngokufunda okungapheli. Ukufunda ukupelwa kwegama kuphela akwanele ngesiNgisi. Kufanele futhi ufunde ukubizwa kwayo futhi uyisebenzise njalo ekuxhumaneni. Ungagcina ngokushesha amagama amasha kwimemori yakho, ikakhulukazi ngokulalela izingoma zesiNgisi.
Kumele kuqashelwe ukuthi lapho usebenzisa amayunithi wesikhathi esiNgisi, izinsuku, izinyanga, futhi kwesinye isikhathi ngisho nezikhathi zonyaka zisetshenziswa ndawonye. Ngokuvamile, kusetshenziswa umthetho othile we-oda ekusetshenzisweni kwabo. Ibhalwe ngendlela yosuku lokuqala bese kuba yinyanga emshweni. Amaphethini wezinyanga nosuku axhunywe komunye nomunye ngokusebenzisa izalathandawo zesikhathi futhi yisihloko sokufunda sesiNgisi esizovela njalo empilweni yansuku zonke.
Ukuvezwa kabusha kwesilulumagama esifundisiwe kuhlala kukunika izibonelo ezintsha ngakho-ke kuqinisa la magama engqondweni yakho. Ngakolunye uhlangothi, ukufunda amagama amasha nezisho kubalulekile ekwakheni isilulumagama sakho, ikakhulukazi ngolimi olunamagama amaningi njengesiNgisi. Isihloko sezinsuku zesiNgisi yisihloko ongasisebenzisa kalula futhi usisebenzise njalo. Uma ngokungazelelwe uqala ukufunda isiNgisi ngethemba lokufunda ngomlingo yonke into nazo zonke izifundo, ungahle udideke futhi uphole kulo msebenzi wokufunda isikhathi eside kakhulu.
Unabo abangane noma obajwayele abathumela ku-inthanethi nge-English? Ungaphuthelwa yibo ekuphakeleni kwezindaba zakho. Skena izinto abazaba futhi ungakhohlwa ukuthola umuntu oyedwa noma ababili nsuku zonke. Zingaba yizindatshana zezindaba noma zomagazini, amavidiyo, izinkulumo, okuthunyelwe kubhulogi, izingoma, noma yini enye: uma ingeyesiNgisi futhi isihloko sikuthanda, kuzokusiza. Ungakhohlwa ukuqhubeka ngesinyathelo ngesinyathelo, uzibuza futhi ucwaninga.
Amanothi wokuphela kwenkulumo yezinsuku zesiNgisi
Njenganoma yisiphi isifundo lapho ufunda ulimi olusha, ukuphindaphinda nokuphimisela okuyikho kungukhiye ekusizeni amagama amasha ukuthi ahlale enkumbulweni yakho. Ngalesi sizathu, ngezansi wabelana ngawe Prakthiza imibuzo mayelana nezinsuku zesiNgisi ve Izinsuku zesiNgisi ziyisampula yemisho Ungafunda isigaba. Ungaphendula imisho lapha ngokuyibhala phansi ephepheni.
Lapho uthatha isinqumo sokufunda isiNgisi, enye yezinkinga ezibaluleke kakhulu okufanele uzifunde izinsuku zesiNgisi. Ukufunda lesi sigaba kahle kusho ukufunda amagama ozowasebenzisa kaningi empilweni yakho yansuku zonke. Kule ndatshana Ungazibhala kanjani izinsuku ngesiNgisi, ukuthi ungabiza kanjani izinsuku ngesiNgisi Sagxila ezihlokweni ezinjalo.
Ukufunda izinsuku zesonto ngesiNgisi kubaluleke kakhulu kubo bonke abafundi bolimi. Ukwazi ukuthi ungasho kanjani izinsuku zeviki, kusukela ekubekeni i-aphoyintimenti kuya ekubekiseni ihhotela, kuyingxenye ebalulekile yengxoxo yansuku zonke. Ngenhlanhla, ukufunda izinsuku zesonto ngesiNgisi kulula futhi sineziphakamiso zokuthi ungakusiza kanjani uzikhumbule.
Imvamisa usebenzisa izinsuku nezinyanga lapho wenza i-aphoyintimenti noma uhlela umhlangano, ikakhulukazi uma ufuna ukwenza ngokukhethekile ngesiNgisi sebhizinisi. Ngakho-ke, kufanele ufunde le ndaba kahle futhi uzame ukukhuluma ngokushelelayo. Ungasebenzisa futhi indlela yokufaka isiNgisi empilweni yakho yansuku zonke, okungenye yezindlela eziyisisekelo zokufunda isiNgisi.
# Ziyini Izinsuku Zeviki NgesiNgisi?
# Izinsuku zesiNgisi
# UMsombuluko Luphi Usuku?
# Izigwebo Eziyisampula NgoMsombuluko - ngoMsombuluko
# NgoLwesibili Luphi Usuku?
# NgoLwesibili - Imisho eyisampula ngoLwesibili
# NgoLwesithathu Luphi Usuku?
# NgoLwesithathu - Imisho eyisampula ngoLwesithathu
# NgoLwesine Luphi Usuku?
# NgoLwesine - Imisho eyisampula ngoLwesine
# Ulwesihlanu Luphi Usuku?
# ULwesihlanu - Imisho eyisampula ngoLwesihlanu
# NgoMgqibelo Luphi Usuku?
# Imisho eyisampula ngoMgqibelo - ngoMgqibelo
# NgeSonto Luphi Usuku?
# ISonto - Imisho eyisampula ngeSonto
# Izinsuku ZesiNgisi Imibuzo Yokuzijwayeza
# Isampula Imisho Yezinsuku NgesiNgisi
# Iziphakamiso Zesihloko Ngezinsuku ZesiNgisi
# Ingoma yezinsuku ngesingisi
# Umusho osetshenziselwe ukubuza ukuthi yiluphi usuku esiNgisini;
# Zihlukaniswa Kanjani Izinsuku Zeviki?
# Isampula lombhalo wesifundo ngezinsuku zesiNgisi
# Amanothi wokuphela kwenkulumo yezinsuku zesiNgisi
Qaphela: Sihlala sizama ukukunikeza ulwazi lwakamuva. Lesi sihloko osifundayo sabhalwa okokuqala cishe ezinyangeni ezi-3 ezedlule, ngo-Agasti 27, 2021, futhi lesi sihloko sagcina ukubuyekezwa ngo-Okthoba 10, 2021.